Blogger of this week: Sagar Sharma - MeroReport
Blogger of this week: Sagar Sharma
पर्वतका सागर शर्मा हाल वनस्थलीमा बसोबास गर्छन । उनी अहिले पुल्चोक क्याम्पसमा कम्प्युटर इन्जिनियरिंङ गर्दै छन । लेख्न रुचाउने सागर ब्लगिङ, प्रोग्रामिङ गर्न निकै रुचाँउछन । ब्लगमा आफ्ना अनुभवको स्वतन्त्र प्रस्तुतिका साथै 'लेटेस्ट प्रविधि अपडेट'का कुराहरु लेख्न मन पराउने सागर यस साताका ब्लगर बन्न सफल भएका छन ।
सर्वप्रथम मेरोरिपोर्टमा साताको ब्लगर बन्नु भएकोमा यहाँलाई बधाइ । साताको ब्लगर हुनुभएकोमा यहाँलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ?
धन्यबाद । साताको ब्लगरको रूपमा चुनिन पाएकोमा खुशी छु । ब्लगिङमा आफ्नो परिचय विस्तार भएको महशुस भएको छ ।
अब तपाईंको ब्लगिङको इतिहासको कुरा गरौँ । तपाईंले कहिले देखि ब्लगिङ सुरु गर्नु भयो? र किन ब्लगिङ गर्न सुरु गर्नु भयो?
मैले चार/पाँच कक्षामा पढ्दादेखि विभिन्न पत्रपत्रिकामा कविताहरु लेख्ने गर्थें, पछि पाठक पत्रहरु लेख्न थालें र नौ कक्षादेखि पत्रपत्रिकामा लेख रचनाहरु प्रकाशित गर्न सुरु गरें । सुरुमा 'फ्री वेबसाइट' बनाएको थिएँ, जसमा आफ्नो परिचय तथा फोटोहरु राख्ने गर्थें । केहि पछि ब्लगमा शिफ्ट भएँ र प्रकाशित लेखहरु त्यहीं पोस्ट गर्न थालें । प्रकाशित लेखहरु इन्टरनेटको माध्यमबाट जहाँ पनि पढ्न सकियोस् भनेर २०६४ सालदेखि मैले आफ्नो ब्लग सुरु गरेको हुँ ।
तपाईंलाई किन ब्लगिङ गर्न मन लाग्छ?
ब्लगिङ भनेको स्वतन्त्रता हो, अनि अध्ययन पनि हो ! आफुलाई लागेको कुरा धक नमानिकन ब्यक्त गर्न सकिन्छ, ब्लगमार्फत । अर्कोतर्फ, कुनै पनि पोस्ट लेख्नुभन्दा पहिले त्यसबारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ, जसले ज्ञान अभिबृद्दीमा सहयोग पुर्याउँछ । ब्लगिङ गर्दै जाँदा, पाठकलाई नयाँ कुरा दिउँ भन्ने लाग्छ, जसले सिर्जनात्मकता बढाउँछ । ब्लगका स्वतन्त्रता, अध्ययन, सिर्जनात्मकता जस्ता गुणहरुले मलाई ब्लगिङ गर्न उक्साउँछ ।
तपाईंको ब्लगमा के कस्ता बिषयबस्तु समावेश हुन्छन?
ब्लगमा आफुले पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गरेका लेखहरु सहित अन्य सामाजिक तथा प्रविधिका कुराहरु लेख्ने गर्छु ।
तपाईंको ब्लगमा के के समावेश भएका छन? आफ्नो ब्लगको बारेमा बिस्तृत रुपमा बताइदिनुस न?
ब्लगमा पोस्ट गरिएका कुराहरु खोजेर पढ्न त मिल्छ नै, मन परेमा अरु माझ पनि शेयर गर्न मिल्छ । त्यस्तै कुनै लेखप्रति प्रतिक्रिया दिन पनि सकिन्छ । ब्लग सक्दो 'सफा' राख्नको लागि अरु अनावश्यक 'फिचर'हरु राखेको छैन ।म अहिले दुईवटा ब्लगमा सक्रिय छु, एउटा मेरो व्यक्तिगत ब्लग www.sagarsharma.com.np हो भने अर्को प्रविधिसंग सम्बन्धित ब्लग www.techteric.com पनि संचालन गरिरहेको छु । इन्जिनियरिङ्को विद्यार्थी र प्रविधिमा बिशेष चासो राख्ने भएकोले मेरा दुवै ब्लगमा कतै न कतै प्रविधिको गन्ध महशुस गर्न सकिन्छ । 'टेकटेरिक' त झन् पुरै प्रविधिसंग सम्बन्धित ब्लग हो । व्यक्तिगत ब्लगमा आफ्ना अनुभव तथा विभिन्न कुराको स्वतन्त्र प्रस्तुति पनि गर्ने गर्छु । 'टेकटेरिक'मा 'लेटेस्ट प्रविधि अपडेट'का कुराहरु नियमित रुपमा लेख्ने तथा विश्लेषण गर्ने गर्छु ।
पछिल्लो पटक कुन बिषयमा के लेख लेख्नुभयो र के कुराले लेख्न अभिप्रेरित गर्यो?
प्रविधिको पुस्तामा हुने प्रेमको बारेमा लेख लेखेको थिएँ । मेरा सर्कलका विभिन्न साथीहरु तथा अन्य व्यक्तिहरुको प्रेममा प्रविधिको 'इन्फ्लुइन्स्' आँफैले देखेर यहि बिषयमा लेख्न मन लागेको हो ।
तपाईंको ब्लगको ट्राफिक कस्तो छ र ब्लगमा पाठकहरुबाट कस्तो प्रतिकिया पाई रहनुभएको छ?
ब्लगमा नयां लेखहरु पोस्ट गरिराख्दा ट्राफिक पनि बढी आउने गर्छ । भिजिटरको संख्या दुबै ब्लगमा राम्रो छ, तुलनात्मक रुपमा 'टेकटेरिक'मा अलि बढी नै हुन्छ । प्रतिक्रियाहरु राम्रै पाइरहेको छु, लेखहरु नियमित रूपमा आउनुपर्ने सल्लाह पाउने गरेको छु ।
तपाईंलाई के लाग्छ ब्लगिङले समाजमा केहि प्रभाव पार्न सक्छ? सक्छ भने कसरी?
ब्लगिङले निश्चयनै समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । ब्लगबाट कुनैपनि कुरा चाँडो थाहा पाइन्छ नै, सम्बन्धित अरु ब्लगहरु पढेर सो कुराको सत्यता केलाउन पनि सकिन्छ । यसले गर्दा समाजमा हुनेगरेका गतिबिधिहरुको तथ्य बाहिर आउनमा सहयोग पुग्छ । हाम्रो अहिलेको अवस्थामा ब्लगको प्रयोगबाट 'सभ्य आन्दोलन'को अभ्यास गर्न सकिन्छ ।
अहिले नेपालमा पनि ब्लगिङको ट्रेन्ड बढीरहेको छ, यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ?
इन्टरनेटको सहज पहुँचसंगै ब्लगिङको ट्रेन्ड बढ्नु स्वभाविक हो, र यो राम्रो पनि हो । ब्लगिङको प्रगतिसंगै मुलुकमा प्रविधिको ज्ञान बिस्तार हुने र प्राबिधिक प्रगतिले पनि गति लिने आशा गर्न सकिन्छ ।
नेपाली ब्लग क्षेत्रलाइ कसरी नियाल्नुभएको छ? तपाईंको बिचारमा नेपालमा ब्लग क्षेत्रको भविष्य कस्तो छ?
नेपाली ब्लग क्षेत्र सुधारोन्मुख छ । नयाँ ब्लगरको संख्या बढ्दै गएको छ, अनि अरु ब्लगरलाई पनि ब्लगमा तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने आभास हुँदै गएको मैले अनुभव गरेको छु । भविष्यमा नयाँ कुराको जानकारी लिनको लागि ब्लग पढ्ने क्रम बढ्ने तथा अझै स्तरीय ब्लगहरु बन्दै जाने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
नागरिक पत्रकारितालाई प्रवर्धन गर्नको लागि मेरोरिपोर्ट सुरु भएको छ । मेरोरिपोर्टको बारेमा तपाईंको के धारणा छ?
मेरोरिपोर्टमा फरक फरक विधाका व्यक्तिहरुको अनुभव शेयर हुने तथा छलफल हुने गरेको देखेको छु । नागरिक पत्रकारिताको प्रवर्धनमा प्रशंसनीय कार्य गरेको छ, मेरोरिपोर्टले !
अन्त्यमा मेरो रिपोर्टलाइ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ?
नागरिक पत्रकारिताको एउटा ठुलो फोरमको रूपमा मेरोरिपोर्टलाई स्थापित गराउन अहिलेको उत्साहलाई कायम राख्नुहोस, शुभकामना !
सागरको ब्लगलिंक :
Comment by Sagar Sharma on March 2, 2012 at 4:17pm
Thanks Aakar bro!
Comment by Aakar Anil on March 1, 2012 at 10:46pm
Comment by Sagar Sharma on March 1, 2012 at 5:18pm
Comment by Ajeeta Sigdel on February 29, 2012 at 5:08pm
Comment by ramesh khatri on February 29, 2012 at 5:01pm
Comment by Amuna Chapagain on February 29, 2012 at 4:49pm
congratulaion sagar ji .
Comment by Indra Dhoj Kshetri on February 29, 2012 at 4:26pm
Congratulations Sagar. Keep writing and blogging.